Xa uthatha isahluko sokuqonda sokufunda naluphina uvavanyo olumiselweyo, nokuba ngaba yi- SAT , ACT , GRE noma enye into-uya kuba nemibuzo embalwa malunga nenjongo yombhali . Ngokuqinisekileyo, kulula ukubonisa esinye sezizathu ezibhalwe ngumlobi onokubhala, ukukholisa okanye ukwazisa, kodwa ngovavanyo olulinganiselweyo, ezo zinto aziqhelekanga enye yeendlela ozikhethayo. Ngoko, kufuneka uyenze injongo yombhali ngaphambi kokuthatha uvavanyo!
Zama isandla sakho kulezi zilandelayo zilandelayo. Bafunde ngoku, uze ubone ukuba ungayiphendula imibuzo engezantsi. Emva kokuba uhlolisise iimpendulo, thabatha ukuphazamiseka kwi -Purpose Purpose Practice 2 .
Izibonelelo ze-PDF kubaTitshala
Injongo yoMbhali Injongo 1 | Iimpendulo Zenjongo yoMlobi Injongo 1
Injongo yoMbhali Injongo Umbuzo # 1: Ukushisa
(US Navy / Wikimedia Commons)
Ngomhla olandelayo, ngomhla we-22 kaMatshi, ngo-6 ekuseni, ukulungiselela ukuhamba kwase kuqalile. Ukugqithwa kokugqibela kwesikhombiso kudibanisa ubusuku. Kubanda kwakumnandi; iinqununu eziboniswa ngamandla. Kwi-zenith ibonakale i-Cross Cross ephawulekayo-ibhere le-polar yase-Antarctic. I-thermometer ibonise i-degrees ezili-12 ngaphantsi kwe-zero, kwaye xa umoya uhlaziywa kakhulu. Amaqabunga eqhwa ayenyuka kumanzi avulekileyo. Ulwandle lwabonakala yonke indawo. Amanqatha amaninzi amnyama asasazeka phezulu, abonisa ukubunjwa kweqhwa elitsha. Kubonakala ukuba isitya esisenxwemeni, esiqingqiweyo ngeenyanga ezintandathu zasebusika, sasingenakufikeleleka. Yintoni eyenziwa yimikhomo ngelo xesha? Ngokungathandabuzekiyo bahamba ngaphantsi kwe-icebergs, befuna ulwandle olunokwenzeka. Ngokumalunga neempawu kunye nezigulane, eziqhelekileyo kubomi bezulu, zihlala kule ndawo.
Inkcazelo yombhali weqondo lokushisa kumigca 43 - 46 ngokuyinhloko isebenza:
A. uchaza ubunzima beentlanzi eziza kuhamba nazo.
B. ukwandisa isilungiselelo, ngoko umfundi unokufumana uhambo olunzima lwabalwandle.
C. qhathanisa umahluko phakathi kwabaphathi beenqanawa abaye bafumana ubunzima kunye nabo abangenayo.
D. ukuchonga izizathu zokubanda kweqondo lokushisa.
Injongo yoMbhali Injongo Umbuzo wesi-2: Ukhuseleko Lentlalo
UMongameli uRoosevelt wasayina uMthetho woKhuseleko loLuntu, ngo-Agasti 14, 1935. (i-FDR uLebhendi kaMongameli kunye neMyuziyam / i-Wikimedia Commons / CC BY 2.0)
Kuze kube sekuqaleni kwee-1900, amaMerika awakhathazeki kakhulu ngekamva labo njengoko bekhula. Umthombo omkhulu wokhuseleko lwezoqoqosho wawukulima, kwaye intsapho eyongezelweyo yanyamekela abadala. Nangona kunjalo, i-Industrial Revolution yaqhelisa esi siko. Ukulima kwanikezela iindlela ezingakumbi zokufumana ubomi kunye nentsapho kunye nezibophelelo zekhaya. ngenxa yoko, intsapho yayingasoloko ikhona ukunyamekela isizukulwana esidala. Ukudakumba okukhulu kwee-1930 kwandiselele le ntlekele yezoqoqosho. Ngoko ngo-1935, iCongress, phantsi kolawulo lukaMongameli Franklin D. Roosevelt, isayinwe kumthetho uMthetho woKhuseleko loLuntu. Lesi senzo sakha inkqubo ejoliswe ekunikeni ingeniso eqhubekayo yabasebenzi abahlala phantsi ekungenani iminyaka engama-65 ubudala, ngokukodwa ngokuqokelela kwemali esuka kumaMerika kumsebenzi. Kufuneka inhlangano enkulu ukuba inkqubo iqhutywe, kodwa ukuhlolwa kweNkcazo yoKhuseleko lweNtlalo kukhutshwa ngo-1940. Ngaphezulu kweminyaka, iNkqubo yoKhuseleko loLuntu iye yahlaziywa kwiingenelo ezingabasebenzi kuphela kodwa nabakhubazekile kunye nabasindayo abaxhamliweyo, kwakunye njengenzuzo ye-inshurensi yezokwelapha ngendlela ye-Medicare.
Umlobi unakho ngokubhekiselele kwiNkcitho yokuPhukisa uku:
A. ukuchonga injongo ephambili yoKhuseleko loLuntu.
B. ugxeke ukuthotyelwa kwe-FDR kwinkqubo eya kuphelelwa yimali.
C. ukuchasana nokusebenza kweNkqubo yoKhuseleko loLuntu kunye nokunyamekelwa kwentsapho.
D. dwelisa enye into ebangela ukuba kufuneke iNkqubo yoKhuseleko loLuntu.
Injongo yoMbhali Injongo Yombuzo Umbuzo wesi-3: Ubugcisa be-Gothic
Isakhiwo seGothic - i-Amiens, iFransi. (Eric Pouhier / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.5)
Indlela yokwenene yokubukela ubugcisa be-Gothic ukuyijonga njengokuba isitayela esicacisiweyo sibophelelwe ngamafomula athile-ngokuba umoya unobuninzi-kodwa kunokubonakalisa umsindo othile, ukuvakalelwa, kunye nomoya owaphefumlela yonke indlela yokwenza izinto ngexesha le-Middle Ages kwi-sculpture kunye nepeyinti kunye nokwakha. Ayikwazi ukuchazwa nayiphi na impawu zayo zangaphandle, kuba ziguqukile, zahluke kwixesha ezahlukeneyo nakwiindawo ezahlukeneyo. Ziyimbonakalo yangaphandle yemigaqo ethile yamakhadi emva kwabo, kwaye nangona le migaqo iqhelekileyo kuzo zonke izitayela ezilungileyo, i-Gothic phakathi kwabo, umphumo wokubafaka kwizakhiwo zonyaka, ilizwe kunye nabantu baya kuhluka njengoko imeko ilizwe, loo minyaka, kwaye abantu bahluka.
Umbhali usenokwenzeka ukuba wabhala inqaku malunga nobugcisa beGothic ukuze:
A. bonisa ukuba ubugcisa be-Gothic abukho isimboli kunye neempawu ezithile njengoko kunomdla othile kwixesha elithile.
B. ukwandisa inkcazo yezobugcisa beGothic kunye nomoya.
C. cacisa inkcazo yobugcisa beGothic njengendlela yobugcisa engenazo iimpawu ezicacileyo.
D. uqhathanisa ubugcisa be-Gothic ubugcisa beeMinyaka ephakathi
Injongo yoMbhali Injongo yombuzo wesi-4: Umngcwabo
(Kris Lochercher / EyeEm / Getty Izithombe)
Umngcwabo wawuselula nje kwaye kulooSondo olukhukhulayo phakathi kwehlobo. Ndathi ndikhangele iminwe yam, i-clammy kunye nokuvuvukala ekutshiseni kwe-dizzy, kwaye ndachukumisa ukuba ndijikeleze emfuleni emva kwecawa. Ubaba wathembisa ukuba imvula evela kuLwesihlanu yayiyophoyisa yonke into, kodwa ilanga livele linyuka onke loo manzi afana nawo ngonyaka. Bonke abesifazana, bembethe abamnyama beentsimbi ezikhangeleka, bexubana kunye kwaye bavuthela amaqanda abo kwi-hankies njengoko bezama ukuzibilisa ngokupholile kunye nephepha lembali elidala uMathers wayeyifake le ngxaki. Umshumayeli uTom wamemeza ngokuqhubekayo ngelizwi lakhe elivakalayo njengelinye iCawa elithandekayo kwaye akukho mntu wafa nangona, ngelixa imifula encinane yomkhuhlane ihamba phakathi kwam emhlane. U-Miss Patterson, utitshala wam esikolweni waseSonto, othe wathandaza wathi, "Kuyihlazo, uyazi." Ubaba wathatha umxhatshazo wamagxa akhe omdala wamalahle, wathi, "INkosi elungileyo iyazi into ebalulekileyo." wayesazi ukuba wayengenabuhlungu ngokwenene kuba "wayengumuntu onentliziyo enzima ongenangqiqo kwaye engekho nto," njengoMama wayethetha xa efika ekhaya efana ne-whisky.
Umlobi uninzi wayesebenzisa ibinzana elithi "imilambo emincinci yemifuduko yenze indlela yayo phakathi komqolo wam" ukuze:
A. Ukwahlula phakathi kwendawo eshushu ecaweni ngexesha lomngcwabo kunye nokupholisa komlambo.
B. qhathanisa indawo eshushu yecawa ngexesha lomngcwabo kunye nokupholisa komlambo.
C. ukuchonga isizathu esiphezulu sokuba umlandisi wayengenakulungiswa ngexesha lomngcwabo.
D. ukwandisa inkcazo yokushisa ngexesha lomngcwabo.
Injongo yoMbhali Injongo Yombuzo Umbuzo wesi-5: Ubunzima obushushu kunye nobushushu
(UKelvinsong / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)
Umgangatho ofudumeleyo yinkqubo ethile yomshumo womoya apho umoya ofudumele ubeka umoya opholileyo. Inxulumene nenkqubo ephantsi yoxinzelelo kwaye ngokuqhelekileyo ihamba ukusuka kwicala lentshona ukuya ngasentla. Ingqungquthela yokufudumala ingabonakalisa ukwanda kweqondo lokushisa kunye nomswakama (izinga eliphezulu lamanzi aphezulu), ukuncipha kwentsholongwane yomoya, ukuguqulwa komoya ukuya kwicala lentshonalanga, kunye nokungena kwemvula. Ibhola elibandayo lelinye icala eliphambili elidibaniswa neenkqubo eziphantsi kweengcinezelo, kodwa ngezizathu ezahlukeneyo, iimpawu kunye neziphumo. Ngexesha lokubanda ebandayo, umoya obandayo ubeka umoya ofudumele endaweni enye. Ibhola elibandayo lihamba lisuka kwinqanaba elingasentla nakwinqanaba, amasondo ahamba phambili afudukela eningizimu ukuya ngasentla. Ibhola elibandayo lingabonakaliswa ngokushisa ngokukhawuleza kunye nokunyanzeliswa kwe-barometric, ukutshintsha komoya ukuya ngasenyakatho okanye entshonalanga, kunye nethuba elilinganayo lokungena kwemvula, ehluke kakhulu kwi-front front! Uxinzelelo lwe-barometric, emva kokuwa, ngokuqhelekileyo lukhuphuka ngokukhawuleza emva kokuhamba kwebandayo ebandayo.
Umbhali usenokuba ubhale inqaku ukuze:
A. Bhala uluhlu lweempawu, iimpawu kunye neziphumo zombini obushushu kunye nebandayo.
B. uchaza izizathu zokubanda kunye nokufudumala.
C. uqhathanisa izizathu, iimpawu kunye neziphumo zemida ebushushu nebandayo.
D. ibonisa iimpawu zombini ezifudumele kunye nezibandayo, ngokuchaza inkalo nganye ngeenkcukacha.
Ngaba Ndifanele Ndizuze I-Degree Business?
Biography kaJohn Albert Burr
Iimpi zeNapoleonic: Imfazwe ye-Aspern-Essling
Amachibi amakhulu kunawo onke e-US nge Surface Area
Ukuzingela iinkolelo kunye namaqiniso